बिज्ञान/प्रविधि Archives - Page2of5- Saptakoshionline
काठमाडौँ – अहिले मोबाइलको ब्यालेन्सबाट आफ्नो सेवा प्रदायकले दिने विभिन्न डाटा प्याकेज मात्रै किन्न मिल्छ । अबको केही महिनामा भने मोबाइलका प्रयोगकर्ताले आफ्नो ब्यालेन्सबाटै पसलमा सामान खरिद गरेर पैसा तिर्न, विद्युत् महसुलसहित विभिन्न सेवाको शुल्क तिर्न सक्नेछन् । मोबाइलको ब्यालेन्सबाट सामान खरिदबाट रकम तिर्न सकिने सेवा नेपाल टेलिकमले सञ्चालन गर्ने भएको छ । यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । ...
सबैभन्दा पहिला इन्टरनेट चलाउने कम्प्युटर, ल्यापटप वा अन्य डिभाइस सुरक्षित हुुनुपर्‍यो । त्यस्तो डिभाइसमा प्रोग्राम ओभरलोड हुनु भएन, अनावश्यक फाइल डेस्कटपमा राख्ने जस्ता कार्य गर्नुहुँदैन । वाइफाइमार्फत नेट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईंको डिभाइस राउटर कनेक्ट हुने स्थानमा हुनुपर्छ । सो राउटरमा तपाईंको बाहेक अन्य डिभाइस कनेक्ट भएअनुसार नेटको स्पिड स्लो, फास्ट हुन्छ । एकभन्दा बढीले धेरै टाढ...
तपाईंंको कम्प्युटरको अपरेटिङ सिस्टम कुन हो ? ३२ बिट कि ६४ ? यो प्रश्न धेरैले सोधेको पाइन्छ । सामान्यत: ६४ बिटको तुलनामा ३२ बिटको कम्प्युटर मूल्यका हिसावले सस्तो पर्छ । त्यसैले धेरैले बजेटको हिसाबले ३२ बिटको कम्प्युटर किन्छन् । ३२ बिटको कम्प्युटरको सफ्टवेयर ६४ बिटको कम्प्युटरमा चल्छ, तर ६४ बिटको सफ्टवेयर ३२ बिटको कम्प्युटरमा चल्दैन । कम्प्युटरमा हुने सबै क्याल्कुलेसन् वा प्रक्रिया माइक्रोप्रोसेस...
काठमाडौं । विश्वको लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक आइतवार दिउँसोदेखि एक्कासी अवरुद्ध बनेको छ । नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै देशमा फेसबुक एक्कासी बन्द भएको हो । एसिया, अमेरिका, र युरोपमा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक एकाएक अबरुद्ध बनेको छ । आइतबार दिउँसो सवा ४ बजेतिरदेखि नेपालसहित विश्वका धेरै देशमा फेसबुक अबरुद्ध बनेको हो । सामाजिक सञ्जाल फेसबुक बन्द भएपछि ट्वीटर सक्रिय भएको छ । पछिल्ला केही समयलाई हे...
अहिलेको हाईटेक लाइफमा सबैसँग समार्टफोन हुन्छ । र मोवाइल सेवाप्रदायक कम्पनीले प्रदान गर्ने २ जी, ३ जी, फोर जी तथा वाईफाईमार्फत इन्टरनेटको प्रयोग नहुने त कुरै भएन । यस्तोमा कुनै पब्लिक (सार्वजनिक) वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त मज्जा नै हुने भयो । प्राय कलेज, सपिङ सेन्टर, सिनेमा हल, तथा होटेलहरुमा वाईफाई खुला रहन्छ । अर्थात् यदि यस्ता ठाउँमा जडित वाईफाईको पासवर्ड पत्ता लाग्यो भने त तपाईको का...
सात दिने आधारभुत उदघोषण तालिम प्रारम्भ
सुमन सागर खतिवडा बेलका/ ब्याक्तित्व बिकास तथा क्षमता अभिबृदी गर्ने उदेश्यले बेलका नगरपालिका वडा नं ८ मा सात दिने आधारभुत उदघोषण तालिम प्रारम्भ भएको छ।। कार्यक्रमको उदघाटन गर्नु हुँदै नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापाले उदघोषणको माध्यम बाट आफुलाइ सन्सार भर चिनाउन र सहि सदुपयोग गर्न प्रशिक्षार्थी लाई शुभकामना दिनुभयो।।नगर को विशेष सहयोगमा नेप्से युवा कल्बले आयोजना गरेको कार्यक्रममा 50 जना सहभागी ...
निसानको नयाँ किक्स गाडी बजारमा
इटहरी । निसान मोटर्सद्धार उत्पादित गाडीहरुको सुनसरीको आधिकारीक विक्रेता ओम साई मोटो कर्प प्रालिले निसानको नयाँ किक्स गाडी बजारमा ल्याएको छ । इटहरीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरि ओम साई मोटो कर्प इटहरीले सार्वजनिक गरेको किक्सको इटहरी उद्योग वाणिज्य संघका कार्यवाहक अध्यक्ष शैलेशकुमार विष्टले एक कार्यक्रम लन्चिगं गरेका हुन । नेपाली उपभोक्ताहरुका लागि उपयुक्त रहेको ओम साई मोटो कर्पका निर्देशक कैलाशवावु...
दोस्त प्लस इटहरीमा सार्वजनिक
इटहरी, अशोक लेल्याण्डको नेपालका लागी आधिकारिक विक्रेता आ.एम.ई मोटर्सले दोस्त प्लस सार्वजनिक गरेको छ ।आइएमइ मोटर्सले इटहरीमा एक कार्यक्रमका विच अशोक लेलैण्डको दोस्त प्लस सार्वजानीक गरेको हो । आइएमई मोटर्स प्रालिले अशोक लेलैण्डको डोस्त प्लस प्रोडक्ट लन्च र टेस्ट ड्राइभ समेत गराएको छ । इटहरीमा एक कार्यक्रम गरेर व्यससायी र उपभोक्ताको विच डोस्त प्लस सार्वजानिक गरेको हो । कार्यक्रममा दोस्त प्लस गाडीको ...
विराटनगर । नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन प्रदेश नं. १ कार्यसमितिमा लोकतान्त्रिक समुह बिजयी भएको छ । कार्यसमितिको विर्तामोड, इटहरि र विराटनगरमा सम्पन्न निर्वाचनको मत परिणाम अनुसार अध्यक्षमा यशवन्त विक्रम साह विजयी भएका हुन् । उनले ३ सय ३९ मत ल्याएका थिए । उनका प्रतिद्धन्दी ढकेन्द्र बमले २ सय ५६ मत ल्याएका थिए ।प्रगतिशिल समुहका तर्फबाट सह सचिबमा एकजना मात्र बिजयी भएका छन् । यसैगरि उपाध्यक्षमा लोचनरा...
काठमाडौं । हिजोआज जताततै अनलाइन शपिङ (किनमेल)बारे सुन्न पाइन्छ । कुनै पनि वस्तु खरीद गर्न पहिलेजस्तो बजारभरि घुमेर समय बिताउनुपर्ने झन्झट अब छैन । घरमै बसेर आफ्नो कम्प्युटर, ल्यापटप र स्मार्टफोनबाट इण्टरनेटमार्फत विभिन्न सामग्री हेरेर खरीद गर्न सकिन्छ । अनलाइन शपिङ कतिपय मानिसको रुचिको विषयसमेत बन्दै गएको छ । आफूसँग समय नहुनेहरूलाई यो किनमेलको राम्रो माध्यम बनेको छ । अनलाइन किनमेल गर्दा कारोबार...